ခေတ်မီ မော်တော်ကား ဘရိတ်စနစ်တွေ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ ?
လက်ရှိ ကျနော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ ခေတ်မီကားတွေရဲ့ ဘရိတ်စနစ်တွေဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ၊ နောက်ပြီး အဲဒီဘရိတ်စနစ်တွေနဲ့ အခြားမော်တော်ယာဉ် အရှိန်ထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်တွေ ဘယ်လို အလုပ်သလဲ။ အဲဒီစနစ်တွေ ချို့ယွင်းပျက်စီးရင် ကားမှာဘယ်လိုအချက်ပြမီးတွေ လင်းလာသလဲ၊ ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲဆိုတာ ဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြပေးပါ့မယ်။
အခုကျနော်တို့ ကားလောကမှာ မြင်တွေ့နေရတဲ့ ဂျပန်ကားအများစုမှာပါတဲ့ အဓိကဘရိတ်စနစ်ကတော့ ABS လို့ခေါ်တဲ့ (Anti-Lock Brake System) ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဘရိတ်တွေကို Lock ဆိုတဲ့ အသေထိန်းချုပ်တာမျိုး မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးတဲ့ စနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ထင်သလို ABS ဆိုတာ Auto Brake System ဆိုတာ လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ Anti-Lock Brake System ဆိုတာသာ အမှန်ဖြစ်ပါတယ်။
အများသိတဲ့အတိုင်း ဘရိတ်ဖမ်းတယ်ဆိုတာ အရှိန်နဲ့ပြေးနေတဲ့ကားမှာပါတဲ့ ဘီးလေးဖက်စလုံးကို ချုပ်ထားလိုက်တာပါပဲ။ အဲဒီလိုချုပ်လိုက်ရင် ဘရိတ်မိရောပေါ့။ ဘယ်လို Anti-Lock ဆိုပြီး မချုပ်ထားတာ ဘာသဘောလဲလို့ တွေးထင်စရာရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဟိုးအရင် ခေတ်ဟောင်းကားတွေတိုင်းမှာ ဘရိတ်ဖမ်းလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပြေးနေတဲ့ကားရဲ့ ဘီးကိုအသေဖမ်းပြီး ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့ ဘရိတ်စနစ်တွေကို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို အသုံးပြုတဲ့အတွက် ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာသလဲဆိုရင် အရှိန်နဲ့ မောင်းနေတဲ့ကားတစ်စီးကို ရုတ်တရက်ဘီးတွေကို အသေထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ဘီးတွေလုံးဝ အသေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်
(၁) အချက်အနေနဲ့ စတီယာတိုင် ထိန်းချုပ်မှု (steering control) လုံးဝလုပ်မရတော့ပါဘူး။ ဘီးတွေလည်နိုင်တဲ့ အခြေအနေရှိမှသာ ဘယ်ညာလှုပ်ရှားလည်ပတ်နိုင်တဲ့ စတီယာတိုင် ထိန်းချုပ်မှုဟာ ဘီးတွေ အသေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ သူလည်းလိုက်လံမလည်ပတ်နိုင်တော့ဘဲ ကားမောင်းသူထိန်းချုပ်ချင်သလို မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။
(၂) အချက်အနေနဲ့ကတော့ ရူပဗေဒ သဘောတရားမှာပါတဲ့ “ရွေ့လျားနေတဲ့ အရာဝတ္တုဟာ ဆက်လက်ရွေ့လျားမယ်" ၊ “တည်မြဲအရာဝတ္တုဟာ ဆက်လက်တည်မြဲတယ်" ဆိုတဲ့သဘောတရားရှိတဲ့
“Law of Inertia" အရ အရှိန်နဲ့ ရွေ့လျားနေတဲ့ကားဟာ ဘီး ၄ ဘီးလုံး ရုတ်တရက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပေမယ့် ကားရဲ့ဘော်ဒီဟာ ဆက်လက်ရွေ့လျားတာကြောင့် ကားတရွတ်တိုက်ပါသွားပြီး အရှေ့ကအရာဝတ္တုကို ဝင်တိုက်မိပါတယ်။
ABS (Anti-Lock Brake System) ကတော့ အဲဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင် အဓိကထားတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ABS စနစ်မှာပါဝင်တဲ့ အဓိကပစ္စည်းတွေကတော့
၁။ Wheel speed sensors - ကားဘီးတွေ အရှိန်မြင့်လည်ပတ်နေသလား၊ ကားဘီးတွေ အရှိန်လျော့ကျသွားသလားဆိုတာကို စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာတွေပါ။ ဒီ sensors တွေကိုတော့ အချက်ပြ signal တွေကို ပေးပို့နိုင်တဲ့ သံလိုက်အမျိုးအစား sensors တွေ၊ hall effect sensors တွေဆိုပြီး အာရုံခံ sensor ပုံစံမျိုးစုံကို အသုံးပြုတည်ဆောက်ပြီး ကားဘီးတွေရဲ့လည်ပတ်နှုန်းတွေကို စောင့်ကြည့်သတင်းပို့ပါတယ်။
၂။ Valve-master cylinder ကနေ ဘရိတ်ဆီတွေကို ထိန်းချုပ်ပြီး လိုသလိုပို့ဆောင်ပေးမယ့်နေရာမှာ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ valve တွေ။
၃။ ABS accumulator - ဘရိတ်တွေကို လိုအပ်တဲ့ pressure ဖိအားရအောင်ပို့ဆောင်ပေးမယ့်၊ မောင်းနှင်ပေးမယ့် pump တွေ။
၄။ ECU – wheel speed sensors တွေကနေ ပို့ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ signal တွေကိုဖတ်ပြီး ABS accumulator တွေ valve တွေကို လိုအပ်သလိုအဖွင့်အပိတ်လုပ်ဖို့ အဓိကမောင်းနှင်ပေးမယ့် Engine Control Unit တွေရယ်ဆိုပြီး ABS System အတွက် တွဲဖက်လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။
ABS ရဲ့ အဓိကအားသာချက်ကတော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ။ ကားဘီး ၄ ဘီးလုံးကို ဘရိတ်နင်းလိုက်ချိန်လုံးဝဖမ်းချုပ်တာမျိုးမလုပ်ဘဲ လည်ပတ်တဲ့အရှိန်ကို (၁ စက္ကန့်ရဲ့ ၁၀၀ ပုံ တစ်ပုံအချိန်လေးတွင်းလောက်မှာကိုပဲ) ဖမ်းချုပ်လိုက်၊ လွှတ်ပေးလိုက် လုပ်ပေးတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက် steering သေတာမျိုးမဖြစ်ဘဲ လိုသလိုကွေ့နိုင်ခေါက်နိုင်တာရယ်၊ နောက် အရှိန်ကို တစ်ချက်တည်းဖမ်းသေတာမဟုတ်ဘဲ လွှတ်လိုက်ဖမ်းလိုက်လုပ်ပေးတာမလို့ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ အင်နာရှားသဘောကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပြီး ဘရိတ်ဖမ်းမိလိုက်နိုင်တဲ့ အကွာအဝေးကို တိုတောင်းစေတာရယ်ပါ။ ဒါတွေကတော့ အခုလက်ရှိကားနည်းပညာလောကမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ ABS ဘရိတ်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ABS စနစ်နဲ့တွဲဖက်ပြီး ယာဉ်တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ စနစ်နောက်တစ်ခုကတော့ Vehicle Stability Control ဆိုတဲ့ စနစ်ပါပဲ။ ဒီ VSC ဆိုတဲ့စနစ်ကရော ဘယ်လိုတွေအလုပ်လုပ်သလဲ၊ ဘယ်လို အားသာချက်တွေရှိသလဲဆိုရင်တော့......
ဒီ VSC ဆိုတဲ့ စနစ်ရဲ့ အဓိကလုပ်ဆောင်ပေးတာကတော့ ကားကိုရုတ်တရက်ချိုးကွေ့လိုက်တာ၊ steering ကို ဆွဲကွေ့လိုက်ရတာ၊ လမ်းအကွေ့တွေမှာ ကားတစ်ဖက်ကိုဆွဲသွားတာ အစရှိတဲ့ယာဉ်အန္တရယ်ရှိလာနိုင်တဲ့ အချိုးအကွေ့တွေမှာ ယာဉ်ကို တစ်ဖက်ဆွဲမသွားအောင်၊ ယာဉ်မောင်းသူလိုချင်တဲ့ ဖက်ကို အလွယ်တကူဆွဲကွေ့လို့ရအောင် ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်။
မြင်သာထင်သာအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကကိုယ့်ကားကို ညာဖက်ယာဉ်ကျောမှာမောင်းနေတုန်း ညာဖက်လမ်းထဲကနေ ကားတစ်စီးက အရှိန်နဲ့ထိုးထွက်လာလို့ ကားကို zip-zap ကွေ့လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ့်ကားဟာ ဘယ်ဖက်ကတစ်ဖက်ယာဉ်ကျောဆီကို ကျော်လွန်ထွက်သွားပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ ယာဉ်မောင်းတဲ့သူက ကိုယ့်ယာဉ်ကို ကိုယ့်ရဲ့ညာဖက်ယာဉ်ကျောပြန်ရောက်အောင် ဆွဲယူဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ ကားအရှိန်ပါရင်ပါသလောက် ဘယ်ဖက်ကကားတွေနဲ့ မျက်နှာခြင်းဆိုင်တိုက်မိတာတွေ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက ကားကိုကိုယ့်ယာဉ်ကျောကနေ ရုတ်တရက်ဘယ်ညာတိမ်းစောင်းကွေ့လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာ တစ်ဖက်ကိုအရှိန်လွန် ပါသွားတာမျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် National Highway Traffic Safety Administration ရဲ့ အကြံပြုတင်ပြချက်တွေအရ ဒီ VSC ဆိုတဲ့ စနစ်ကို အခုခေတ်ပေါ်ကားတွေမှာ တပ်ဆင်သုံးစွဲလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစနစ်ကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကားစတီယာရင် ရုတ်တရက်ကွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ လမ်းအကွေ့တွေမှာ ကားတစ်ဖက်တစ်ခြမ်းကို ဆွဲပါသွားတာမျိုး ဖြစ်တာတွေကို 67% လောက်လျှော့ချနိုင်ပြီး ကားကို အလွယ်တကူပြန်လည် တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ချိုးကွေ့နိုင်၊ တည့်မတ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ VSC စနစ်မှာပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့
၁။ Steering Angle Sensor
၂။ Yaw Rate Sensor
၃။ Lateral acceleration Sensor
၄။ Wheel Speed Sensor အစရှိတဲ့ အာရုံခံ sensors တွေကိုအသုံးပြုပြီး ကားဘေးတိုက်စလစ်ဖြစ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဒီစနစ်ရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုက ကားကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်သို့ ဆွဲယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကားရဲ့အရှိန်ကိုလျော့ချနိုင်ဖို့ ကားအင်ဂျင်ရဲ့အရှိန်နဲ့ဆွဲအားကိုပါ လျော့ချနိုင်အောင် စီမံထားတာပါပဲ။ ဒါကတော့ ABS စနစ်နဲ့တွဲဖက်အသုံးပြုနေတဲ့ ယာဉ်တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ VSC စနစ်ရဲ့ အားသာချက်တွေပါပဲ။
ABS စနစ်နဲ့ အတူတွဲပြီး ကားအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ နောက်ထပ် စနစ်တစ်ခုက TRC ဆိုတဲ့ စနစ်တစ်ခုပါ။ ဒီကောင်လေးကတော့ ကားလမ်းတွေမှာ ရေတင်နေတဲ့အချိန် ကားကိုအရှိန်နဲ့မောင်းနှင်လိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာ ကား slip ဖြစ်ပြီး ချော်ထွက်တာမျိုးတွေကို ကာကွယ်ဖို့သုံးထားတဲ့ စနစ်လေးတစ်ခုပါ။
ဒီကောင်လေးကတော့ ကားဘီးတွေရဲ့အလှည့်အပြောင်းတွေ၊ ကားဘီးမှာပါဝင်တဲ့ တာယာနဲ့ လမ်းမျက်နှာပြင်ထိတွေ့မှုတွေကိုအာရုံခံပြီး ကားဘီးမချော်အောင်ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ စနစ်ပါ။ ဒီကောင်ရဲ့ အာရုံခံ sensors တွေဟာလည်း ABS ၊ VSC တို့ရဲ့ အာရုံခံ sensors တွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပြီး ကားဘီးတစ်ဘီးချင်းစီရဲ့ ချော်ထွက်မှုနှုန်းတွေကို စောင့်ကြည့်ပြီး ဘီးတစ်ခုခြင်းစီကို သီးသန့်ဘရိတ်ဖမ်းတဲ့ နည်းပညာကို အသုံးပြုကာ ချော်ထွက်နေတဲ့ဘီးတွေကို အလွယ်တကူတည်ငြိမ်အောင် လုပ်ပေးတာမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ VSC ၊ TRC အစရှိတဲ့ system တွေကို ပုံမှန်ကားအရှိန်နဲ့ မောင်းနှင်နေတဲ့အချိန်မှာ အမြဲမပြတ်ဖွင့်ထားပြီး အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပေမယ့် ကားက သဲတွေ၊ ရွံ့နွံတွေ၊ ဗွက်တွေ၊ နှင်းတောတွေထဲမှာ နစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်တော့ ဒီ VSC ၊ TRC စနစ်တွေကို disable လုပ်ပြီး ပိတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ဒီစနစ်တွေဟာ ဘီးလည်ပတ်မှုတွေကို အာရုံခံပြီး ဘီးချော်ထွက်နေတာ၊ မူမမှန်တာတွေဖြစ်တဲ့အခါ အင်ဂျင်ရဲ့ လည်ပတ်မှုနှုန်းတွေကို လျော့ကျအောင် လေတံခါးလေအဝင်တွေကို လျော့ပစ်တာ၊ တချို့ကားတွေမှာဆို ဆီပေးနှုန်းတွေ လျော့ပစ်တာမျိုးတွေရှိလို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီကောင်တွေကို ကားဘီးနစ်တဲ့အခါတွေမှာ ပိတ်ပေးထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲခင်ဗျာ။
ဒီ Electronic Brake Force Distribution System ကလည်း ABS စနစ်နဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုတတ်တဲ့ ဘရိတ်ဖမ်းတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီစနစ်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံလေးကတော့ ပုံမှန်ဘရိတ်ဖမ်းတဲ့ နည်းစနစ်တွေနဲ့မတူဘဲ ကားရဲ့အရှိန်၊ ကားပေါ်မှာ လူဘယ်နှစ်ယောက်ပါလာသလဲ၊ ကားပေါ်မှာ သယ်ဆောင်ထားရတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ အလေးချိန်၊ ကားကွေ့လိုက်တဲ့ အကွေ့အတိမ်းအစောင်းပမာဏ၊ ကားမောင်းနေချိန် ပြင်ပရာသီဥတု အခြေအနေ၊ လမ်းအခြေအနေ တွေကိုတွက်ချက်ပြီး ကားဘီးတစ်ခုခြင်းစီကို မတူညီတဲ့ ဘရိတ်ဖိအားတွေပေးပြီး ဖမ်းပေးတဲ့ စနစ်ပါ။ ဒီစနစ်နဲ့အတူတွဲဖက်ပြီး အသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့ အခြားစနစ်တစ်ခုကတော့ BA (Brake Assist) ဆိုတဲ့ စနစ်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီစနစ်က အရေးပေါ် အခြေအနေတွေ ဘရိတ်ဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ကားမောင်းသူ (အထူးသဖြင့် မကျွမ်းကျင်သူ) က ဘရိတ်ခြေနင်းပြားကို လိုအပ်တဲ့ ဖိအားရောက်အောင် မနင်းလိုက်သိတိုင် ဘရိတ်ကိုကူပြီးနင်းပေးတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်၊ ဘရိတ်ဆုံထဲကနေ လိုအပ်တဲ့ဖိအားရောက်အောင် ကူနင်းပေးတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ABS ၊ VSC ၊ TRC ချက်မီးတွေ ဘာလို့လင်းလာသလဲ?
အခုနောက်ပိုင်း မော်ဒယ်မြင့်ကားတွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုက အပေါ်ကပြောထားတဲ့ ဘရိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မီးတွေ အတွဲလိုက်၊ အစုံလိုက် လင်းလာတာမျိုးပါ။ ဒီကောင်တွေ ဘာလို့လင်းလာရသလဲဆိုရင်တော့
၁။ Wheel Speed Sensors တွေပျက်စီးတာ
၂။ ABS Motor (or) Accumulator တွေမကောင်းတာ
၃။ Sensor တွေနဲ့ Motor ကြား၊ Motor နဲ့ ECU ကြား wiring problem ကြောင့် connection တွေပျက်တာ
၄။ တချို့ကားတွေမှာဆိုရင် ဘရိတ်ရှူးတွေပါးတာ
၅။ ဘရိတ်ဆီပေါက်တာ၊ ဆီလျော့နေတာ
၆။ Sensors တွေရေစိုတာ၊ sensors တွေကြေးကပ်တာ အစရှိတဲ့ အခြေခံပြဿနာတွေကြောင့် ABS ၊ VSC ၊ TRC ချက်မီးတွေ လင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကားဘရိတ် စနစ်တစ်ခုခု ချို့ယွင်းမှုဖြစ်နေပြီမလို့ ဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာ ပျက်စီးယိုယွင်းနေလဲသိရအောင် ကျွမ်းကျင်ဝပ်ရှော့တွေမှာ ခေတ်မီ diagnostic စက်တွေနဲ့ ပြစ်ချက်ရှာဖွေစစ်ဆေးပြီး အမြန်ဆုံးပြုပြင်ဆောင်ရွက်မှစိတ်ချရမယ်လို့ အသိပေးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမအားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတကြွယ်ဝပြီး ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Volkswagen Tiguan Review (International)